Waddada Ceerigaabo Waa Saaddaal Rumoowday
Wednesday May 09, 2018 - 15:27:10 in Maqaallo
Jidka isku Xidha Burco iyo Ceerigaabo waxaa dhererkiisu gaadhayaa 360km Marka lagu darro 60km oo ah Meesha laga Qaaday waddada
Isku tashigga bulshaddu Wuxuu bidhaamiyaa himillo iyo horumar taam ah, oo ay Ma'hadiyaan jiillal badan,
lkn Horumarka bulsho Higsataa Wuxuu u baahanyahay Hoggaamiye adag oo leh Hal-Abuur iyo Hamno dheer oo uu kaga Midho dhaliya Himillada Shacabka.
Markii U taladda, dalka Haaneeday Madaxweynihii horumarka, Somaliland Ahmed (Siilaanyo) Waxaa lagu dhiiraday In la'dhiso Jidka isku Xidha Burco iyo Ceerigaabo oo ay Ka Maaggeen, dowladihii badnaa ee dalka Soo Maray Illaa Maxmiyaddii Ingiriiska iyo Jamhuuriyaddii Soomaalida ee burburtay (1991).
Jidka isku Xidha Burco iyo Ceerigaabo waxaa dhererkiisu gaadhayaa 360km Marka lagu darro 60km oo ah Meesha laga Qaaday waddada ee tuuladda INA afmadoowe oo dhinaca bari Burco ka Xigta 60km.
Jidkan waxaa lagu dhisay Canshuurta laga qaado dadka reer Somaliland, Wuxuuna Marayaa Marxaladii u danbaysay oo ah dhamaad Mashruucan oo ah kii Ugu Waynaa ee Somaliland laga hirgeliyo (27)todoba iyo labaatankii Sanno ee Somaliland jirtay.
Shacabka Gobolka Sanaag ayaa go'doon ka ahaa Somaliland Inteeda kale Waxaana Khayraadka gobolka ka Faaiidaysanjiray Meela kale oo loo dhoofinjiray Wax Soo Saarka gobolka Sanaag, dhinaca Kale gobolka Sanaag ayaa ah Gobolka Qaniya Waxaana ku yaalla Buuraha Caanka ah ee Daallo iyo Surad Sidoo kale Wuxuu gobolku Caanku Yahay waxa yaabbo ay ka Mid yihiin Beeyyada iyo Faleemka.